बलेरोको ठक्करबाट बालकको मृत्यु- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
बलेरोको ठक्करबाट बालकको मृत्यु
भाद्र २३, २०७६ रासस
चितवन — कालिका नगरपालिका–९ शक्तिखोरमा बलेरोको ठक्करबाट चार वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा गोर्खा जिल्ला घर भई हाल शक्तिखोरमा आमा बाबुसँग बस्दै आएका हासिल मियाँको छोरा हमिद रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार ना ४ च २५५८ नम्बरको बलेरोले बालकलाई आइतबार साँझ ७ः३५ बजे ठक्कर दिएको थियो ।
बलेरोको ठक्करबाट घाइते बालकको उपचारका क्रममा पुरानो मेडिकल कलेजमा राति ८ बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । बलेरो प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ भने चालक फरार रहेको र खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:४६
प्रजनन हक र मानवीय संवेदना
भाद्र २३, २०७६ सम्पादकीय
चिकित्सकले आराम गर्न सिफारिस गरे पनि प्रधानाध्यापकबाट बिदा नपाएकै कारण राजधानीमै कार्यरत एक गर्भवती शिक्षिकाले जुन क्षति बेहोर्नुपर्‍यो, त्यो अत्यन्तै हृदयविदारक छ ।
असनस्थित त्यौड माविकी ती शिक्षिकाले बिदा नपाउँदा कष्ट खपेर कक्षामा उपस्थित हुनु मात्र परेन, शिशु जन्मेपछि सन्तान वियोगको चोटसमेत सहन बाध्य हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्यमा जटिलता आएको जानकारी गराउँदा गराउँदै गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिएर प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि देखाएनन् ।
जबकि, सुत्केरी हुनुअघि र पछि निश्चित दिनसम्म बिदा दिनु उनको कानुनी दायित्व नै हुन्थ्यो । प्रक्रियामा केही अन्योल लागेको भए पनि कमजोर स्वास्थ्य स्थितिलाई दृष्टिगत गरी शिक्षिकालाई आराम गर्न दिनु उनको नैतिक कर्तव्य थियो । पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर शिक्षिकालाई छुट्टी दिनु आफ्नो सामान्य व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो भन्नेसम्म पनि उनले बुझ्न सकेनन् ।
गर्भ आठ महिनाको छँदा अस्वस्थ भएपछि ती शिक्षिकाले गत चैत २४ गते प्रधानाध्यापकलाई सुत्केरी बिदाबापत पाउने सुविधा अग्रिम रूपमा कट्टा गराइदिन आग्रह गर्दै बिदाका लागि निवेदन लेखिन् । चिकित्सकको ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने’ सिफारिसका बाबजुद प्रधानाध्यापक केसीले बिदा दिएनन् ।
जेठ २८ गते दोस्रो पटकसमेत बिदा अस्वीकृत गरे । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बिदा अस्वीकृत भएपछि असार २६ गते उनले राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिइन् । आयोगले बिदा स्वीकृत गर्न प्रधानाध्यापकलाई पत्र लेख्यो । ‘बिदाबाट वञ्चित गर्नु महिलाविरुद्धको हिंसा भएको’ भन्यो ।
तर प्रधानाध्यापकले आयोगको पत्रमाथि आपत्ति जनाए । उल्टै शिक्षिकालाई स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पारे र आयोगको पत्र फिर्ता गर्न धम्की दिए । बिदाबाट वञ्चित ती शिक्षिका चिकित्सकले तोकेको मिति नाघिसक्दा पनि विद्यालय जान बाध्य भइन् । जागिर जाने भयले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने दिन पनि पढाउन गइन् । त्यही धपेडीबीच प्रसूति गृहमा जन्माएको शिशुको निधन भयो ।
संविधानले ‘सुरक्षित मातृत्व वा प्रजननको हक’ सुनिश्चित गरेको छ । त्यही हक कार्यान्वयन गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा ‘सुत्केरीअघि वा पछि ९८ दिन तलबी बिदा पाउने, त्यतिले अपुग भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा एक वर्ष बेतलबी बिदा पाउने’ उल्लेख छ । यो सुविधा सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थामा काम गर्ने महिलाले पाउने व्यवस्था छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा पनि सुत्केरीअघि वा पछि ६० दिनसम्म तलबी बिदाको सुविधा छ ।
शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्रसूति बिदा कार्यान्वयन गर्न/गराउन गत मंसिर १९ मा देशभरका शिक्षा इकाईमा पत्र पनि पठाएको छ । तैपनि मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट मुस्किलले २/३ किलोमिटर टाढा त यो हाल छ भने अन्यत्र के होला ?
बिदा दिनुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै, संवैधानिक आयोगले समेत निर्देशन दिइसक्दा पनि प्रधानाध्यापकबाट यो ढंगको उत्पीडन हुनु गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । ती प्रधानाध्यापकले आफ्नो विवेकले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जरुरी त देखेनन् नै, महिला आयोगले पत्र पठाएर ‘यसो गर्नु हिंसा हो’ भनेर चेतावनी दिँदा पनि टेरेनन् । उल्टै उजुरी दिएको भनी शिक्षिकासित स्पष्टीकरण मागे, जुन पीडित महिलामाथि अर्को प्रकारको हिंसा नै हो ।
प्रधानाध्यापक विद्यालयको व्यवस्थापक मात्र होइन, सामाजिक अगुवा पनि हो । असल शिक्षा दिएर समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याउनु उसको कर्तव्य हो । यस घटनामा ती प्रधानाध्यापक आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएका मात्र छैनन्, उनको रबैया सरासर दण्डनीय देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, लैंगिक तथा मानवीय असंवेदनशीलताको यस घटनाबारे जानकार भएर पनि तालुक शिक्षा समन्वय इकाईलगायतका निकायहरूले कुनै कदम नचाल्नु आश्चर्यको विषय छ । यस घटनामा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ताकि हरेक कार्यालय/निकायमा जिम्मेवारी वहन गर्नेहरूले यस्तो हर्कत गर्न नसकुन् ।
साथै, मुलुकका प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । र, सबै सरकारी नियमहरूमा प्रजनन ऐनले तोकेको जति नै दिन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो बिदाको प्रावधान निजी विद्यालय र निजी प्रतिष्ठानहरू सबैतिर अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक महिलालाई स्वस्थ बच्चा जन्माउने र हुर्काउने वातावरण प्रदान गरिनुपर्छ ।
यस मामिलाले नोकरी गर्ने गर्भवतीहरूले भोग्नुपर्ने समस्याप्रति ध्यान खिच्न राज्य र समाजलाई घचघच्याएको छ । सहरको यो घटना त सार्वजनिक भयो, देशको दूरदराजमा नजाने कति यस्ता मामिला गुमनाम होलान् । पेटमा गर्भ बोकेर र काखीमा नानी च्यापेर नोकरी गर्न हिँड्ने महिलाका व्यथा कति होलान् ।
तसर्थ, कार्यालयहरू मात्र होइन, सबै सार्वजनिक थलोहरू गर्भवती महिलाका लागि सहज र सहयोगी बनाउनु सभ्य समाजको कर्तव्य हो । झट्ट हेर्दा प्रत्यक्ष भौतिक आक्रमणजस्तो नलाग्ने र सोझै विभेदजस्तो नदेखिने तर प्रकारान्तरले लैंगिक उत्पीडन जारी राख्ने यस्ता सबैखाले भेदभावविरुद्ध चनाखो बन्नु सबै न्यायप्रेमीको दायित्व हो ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:३२
सांसद यादवलाई कोरोना पुष्टि भएपछि सिन्धुली वन कार्यालय सिल
५ सय रुपैयाँ लुट्न हत्या
चितवनमा बसको ठक्करबाट प्रहरी हबल्दारको मृत्यु
त्रिशूलीमा ट्रक खस्यो, चालकले हाम फालेर ज्यान जोगाए
घूससहित नियन्त्रणमा लिइएका चार प्रहरी निलम्बित
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा जोशी
अपडेटः सोमबार, १८ साउन, २०७७ । १९ : ५० बजे
तुलानारायण साह श्रावण १८, २०७७
हालै मधेसमा मलर सदाको भोकले, राजु सदाको क्वारेन्टिनमा सामान्य औषधिबिना र शम्भु सदाको प्रहरी हिरासतमा सामान्य मृत्यु नभई महादलित भएकाले जानीजानी वा परिस्थितिजन्य हत्या भएको...
सत्याग्रहीलाई किन सुन्दैन सरकार ?
कृष्ण खनाल श्रावण १८, २०७७
कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ता ई साउन ३ गतेदेखि अनशनमा छन् । कोभिड प्रकोपबाट नागरिकको जीवन जोगाउन यो अभियान सञ्चालन गरेका...
सरकार र नागरिकको अबको दायित्व
सम्पादकीय श्रावण १८, २०७७
मुलुकमा ‘लकडाउन’ अन्त्य हुनुको अर्थ, सम्पूर्ण परिस्थिति पुरानै अवस्थामा फर्कनु थिएन । कोरोनाकालीन नयाँ अवस्थाअनुरूपको आचारमा सबैले आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै जानुपर्ने थियो । तर, यही मुख्य मामिला...